မေတ္တာရေစင်: *မေတ္တာနှလုံးသားဖြင့် မြန်မာပြည်သို့ အကူအညီပေးမည့် Metta World Foundation*
*မေတ္တာနှလုံးသားဖြင့် မြန်မာပြည်သို့ အကူအညီပေးမည့် Metta World Foundation*
မေတ္တာ နှလုံးသားဖြင့် မြန်မာပြည်သို့ အကူအညီ ပေးမည့် စင်္ကာပူနိုင်ငံ အခြေစိုက် Metta World Foundation လူမှုကူညီရေး အသင်းကို (၂၈-၀၆-၂၀၀၉ ) တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အောင်မြင်စွာ ဖွဲ့စည်း နိုင်ခဲ့သည်၊ အထူးသဖြင့် လိုအပ်နေသော မိဘမဲ့ ဂေဟာများ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာသင် ကျောင်းများ ဆွံအ နားမကြား ကျောင်းများ ကျန်းမာရေး လိုအပ်ချက်များကို တတ်နိုင်သလောက် အကူအညီပေးရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ဤ Metta World Foundation အသင်းဝင် မန်ဘာများတွင်း ဘာသာရေး အငြင်းပွားမှု နိုင်ငံရေး ဆောင်ရွက်မှု ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ လူမှုရေး စွက်ဖက်မှု စီးပွားရေး ပါဝင်လာမှုတို့ လုံးဝ မရှိစေရဘဲ ပရဟိတ သက်သက် စေတနာ မေတ္တာ အပြည့်ဖြင့် ချွေးနဲစာများကို ဂျူလိုင်လမှ စတင်ကာ မြန်မာပြည်သို့ လှူဒါန်းမည် ဖြစ်ပါသည်၊ ပရဟိတ စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ဘယ်နေရာ၌ နေနေ ပါဝင် ကူညီနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးအပ် ပါသည်။ ဒုက္ခ ရောက်နေသူ မပြည့်စုံသူ များကို တတ်နိုင်သလောက် အကူအညီ ပေးခြင်းဖြင့် လောက ကမ္ဘာ လှပရေး မေတ္တာကမ္ဘာ ပြန့်ပွား ရှင်သန်ရေးကို ဦးတည်၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မေတ္တာကမ္ဘာ ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ ၀င်ရောက် လိုသူများ အနေဖြင့် မန်ဘာအဖြစ်ဖြင့် ဖြစ်စေ Volunteer စေတနာ့ ၀န်ထမ်း အဖြစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ Adviser အနေဖြင့် ဖြစ်စေ ၀င်ရောက်နိုင်ပြီး မန်ဘာများ အနေဖြင့် အွန်လိုင်း ကွန်ဖရင့် အစည်းအဝေးသို့ အကြောင်း မရှိဘဲ မပျက်ကွက်ရ၊ လစဉ် မန်ဘာကြေး စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀-ဒေါ်လာ လှူဒါန်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ပါဝင်စား သူများ အောက်ပါ အီးမေးလ် ဖုန်းနံပါတ် များသို့ ဆက်သွယ်နိုင် ပါကြောင်း ၀မ်းမြောက်ဖွယ် အသိပေးအပ် ပါသည်။
အရှင်တိက္ခဉာဏာလင်္ကာရ ( President )
Ph. 94-71 36 00988
ကိုမျိုးမင်းကျော် ( First Organizer )
ph. 65-9235 5291
ကိုဝေယာလင်း ( Discipline manager )
ph. 65-9295 0857
မအိမီကို ( Communicator )
ph. 65-9189 5772
30.06.2009, TUE:, 07:07:20 PM !--READ-MORE-STARTS-->
Posted by ဖိုးသား at 20:49
စန္ဒီမိုးမြင့်6July 2009 at 09:05
ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခု အောင်မြင်စွာဖွဲ့စည်းသွားတဲ့ အတွက် ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဖုန်းနံပါတ်များကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့် အများအားဖြင့် စင်ကာပူကလို့ ခန့်မှန်းနိုင်ပေမယ့် မိခင်အဖွဲ့ အစည်းက ဘယ်နေရာဘယ်နိုင်ငံမှာ ဆိုတာ ဖော်ပြထားတာ မတွေ့မိဘူး ။အမှတ်တမဲ့ ဘဲ မရေးမိတာလား? အဖွဲ့စည်းတစ်ခု ကို ဖွဲ့စည်းပြီး အလုပ်ရှုပ်လွန်းအားကြီးလို့ မေ့သွားတာများလား ?
Unknown 11 October 2010 at 13:19
We don't forget to write down where our mother organization is. We intentionally hide this because this is not easy to get legal for organization. Actually our member is mostly from Singapore but also include from HK , Russia and others countries. We don't focus where you are from and who you are, we only focus what we can help our Myanmar citizens. Anyway, thank for your great comment.